चर्चित सिरियल नागिनकी निर्मात्री एकतालाई सय करोड ज'रिवाना ? - Filmy News Portal Of Nepal
भारतीय चर्चित निर्मात्री एकता कपुरले सिरियल निर्माणमा माहिर निर्मात्रिको रुपमा परिचित छिन् । उनले बनाएका प्राय सबै सिरियलले दर्शकको मन जितेको छ । तर, हालै उनले निर्माण गरेकी वेव सिरिज ‘एक्सएक्सएक्स अनसेन्सर्ड २’ यतिबेला वि’वादमा फसेको छ । यो वेव सिरिजको एक भागमा देखाइएको दृश्यले भारतीय सेनाको अ’पमान गरेको भन्दै निर्माण कम्पनी वि’रुद्ध उ’जुरी परेको हो ।
हिन्दुस्तान भाउ नामक संस्थाले मुम्बई प्रहरीमा उ’जुरी द’र्ता गरेपछि एकता कपुरको नाममा अ’ल्टिमेट’म पत्र समेत पठाएको छ । जसमा उनले माफी माग्नुपर्ने मात्रा नभई भारत सरकारलाई एक सय करोड ज’रिवाना पनि तिर्नुपर्ने बताइएको छ ।
प्रसारित भाग ह’टाउनुपर्ने, भारतीय सेनासँग मा’फी माग्नुपर्ने र ज’रिवाना स्वरुप भारत सरकारको खातामा सय करोड दिनुपर्ने माग गरेसँगै एकता त’नावमा परेकी छिन् । यदि अल्टिमेटमलाई बे’वास्ता गरेको खण्डमा सर्वोच्च अदालतमा उ’जुरी दिने र बालाजी फिल्मसलाई ब’हिष्कार गर्ने चे’तावनी समेत दिइएको छ ।
उक्त सिरिजमा कलाकार अदिती कोहलीले आर्मी अफिसर्सको पत्नीको भूमिका निर्वाह गरेकी छिन् । जहाँ आफ्ना पति ड्युटीमा गएपछि उनले एक व्यक्तिलाई घरमा बोलाउँछिन् र पतिको युनिफर्म लगाएर अ’न्तरङ्ग दृश्य देखाइएको छ । यो दृश्यलाई ‘हिन्दुस्तानी भाउ’ले भारतीय सेनाको अ’पमान गरेको भन्दै उ,जुरी दिएको हो ।
“विवाहको बधाइ सैफ अंकल” अमृतासंग सैफअली खानले बिवाह गर्दा करिना यति सानी थिईन !
सलमान खानसानै देखि चतुर थिए (तस्बिर सहित)